Akwụkwọ kacha mma nke 5 site n'aka Matilde Asensi ›2022
La Onye edemede kacha ere nke ọma na Spain bụ Matilde Asensi. Olu ọhụrụ na ike dị ka nke Dolores Redondo Ha na -abịaru nso ohere nsọpụrụ nke onye edemede Alicante, mana ha ka nwere nnukwu ohere iru.
N'ime ogologo ọrụ ya, azụmaahịa ya na ọnụọgụ ndị na -agụ akwụkwọ na mba anyị, nha anya ga -abụ Javier Sierra.
M na -akpọta onye edemede a na blọọgụ m iji gosipụta ọkwa m. Ndị akwụkwọ akụkọ ise kacha mma nke Matilde Asensi dere.
Ime ụlọ Amber
Ngosipụta izizi ọ bụla nwere ihe bụ eziokwu nke ọrụ ndị a na -emetụta, nke na -enweta n'ọfịs mana ọ ga -efufu ntụpọ nke anwansi.
Atụmatụ nke ime ụlọ Amber: Na 1941, n'oge Agha IIwa nke Abụọ, ndị agha Nazi weghaara obí eze Tsarist na ebe ngosi ihe mgbe ochie nke Soviet Union wee bute ọrụ nka dị oke ọnụ na Germany.
N'ime ihe ndị ezuru ohi bụ ihe ịchọ mma pụrụ iche, ihe pụrụ iche nke furu efu n'oge ikpeazụ nke agha ahụ: Ime ụlọ Amber, ụlọ nke narị afọ nke XNUMX wuru kpamkpam site na amber Baltic amber, nke mgbake nke taa na-akpagbu ndị Russia. .
Ana Galdeano, onye a na -akwanyere ùgwù n'oge ochie sitere na Avila na onye otu mba ndị ohi nka "Otu chess", a ga -amanye ya ịkọwapụta atụmatụ dị mgbagwoju anya nke ndị isi Nazi abụọ dị ize ndụ ma nwee ọgụgụ isi kpebiri n'afọ iri gara aga, bụ ndị kpebiri ime ka akụ na ụba a na -apụghị ịgụta ọnụ na, karịa, ụlọ amba.
Maka nke a, ọ ga -enweta enyemaka nke onye nchịkọta Portuguese, José Cavallo, onye ibe ya na -enweghị atụ na nkata ha ga -eji oge dị ụtọ na nke na -adịghị mma, yana ọbụna dị oke egwu.
Nkwenye nke ọrụ meteoric nke onye ode akwụkwọ nke na -akwụsịghị ịtụ ya n'anya atụmatụ aghụghọ dị omimi gburugburu ụwa nka na ụdị nsọ ya.
Nkata nke Caton Ikpeazụ: N'okpuru ala obodo Vatican, nke dị n'etiti codex dị n'ọfịs Archive ya, Nwanna Nwanyị Ottavia Salina, onye ama ama ama ama ama n'ụwa niile, nyere ọrụ ịkọwapụta ụfọdụ ihe ijuanya pụtara na ozu onye Etiopia: mkpụrụedemede Greek asaa na obe asaa.
A hụrụ osisi atọ yiri ka ha abaghị uru n'akụkụ ozu ahụ. A na -enyo enyo niile maka eziokwu na iberibe ndị a bụ n'ezie Vera Cruz, ezi obe nke Kraist.
Nke furu efu
Nkata dị omimi gbadoro ụkwụ na nke a n'ọmụmụ asụsụ, asụsụ mgbe ochie nwere ozi zoro ezo dị ebube n'ụdị ya dị omimi.
Nchịkọta nke mmalite furu efu: Arnau kwenyesiri ike na mgbagha echiche nwanne ya metụtara ọmụmụ ndị ọ na -eme gbasara asụsụ Aymara oge ochie yana na ọbụbụ ọnụ oge ochie kụrụ Daniel.
Site na nyocha na idekọ ọrụ nwanne ya nwoke, Arnau chọpụtara na asụsụ a dị iche na nke ndị ọzọ niile n'ihi na ọ zuru oke ma na -eso usoro ka o wee dị ka asụsụ mmemme mgbakọ na mwepụ ma nwee ike ịhazigharị uche mmadụ. Ụmụ nke ịrọ òtù Yatiris oge ochie bụ ndị na -ahụ maka ikesa ihe ọmụma nke ike okwu.
Ya na ndị enyi abụọ, Marc na Lola (ndị omekome mara mma), Arnau na -aga Bolivia ịga leta mkpọmkpọ ebe nke obodo Tiahuanaco oge ochie, ebe ọ zutere onye isi Daniel wee gaa n'otu ebe maara akụkọ banyere yatiris na akpaala okwu ha.
Na mbido onye na -emegide ya, onye nkuzi ahụ ghọrọ onye enyemaka dị mkpa nke Arnau na njem ya na mpaghara ndị dị ize ndụ nke oke ọhịa Amazon, ebe ndị na -eme ngagharị iwe na -achọ naanị ọgwụgwọ ga -agwọ Daniel nke ọbụbụ ọnụ.
Trilogy «Martín Ojo de Plata
N'ịnọ ọdụ n'akwụkwọ ọgụgụ nke ndị na -ere ahịa kacha mma, Matilde Asensi kpebiri ịchọ ndị na -agụ akwụkwọ ọhụrụ na ndị na -eto eto, ahịa nwere ike inwe nnukwu ihe nkiri iji bido ịgụ ihe.
Arụrụ m ya ike n'akwụkwọ ya kacha mma 5 maka ebumnuche ahụ na ntụgharị ihe okike ahụ, na -ejigide ịdị mma na mmasị na nkata ahụ.
Nchịkọta nke Martín Ojo de Plata trilogy: Catalina Solís bụ olu onye mbụ na-esonyere anyị na trilogy. Akụkọ ya malitere na 1598, n'etiti Oke Osimiri Caribbean. N'ịbụ onye lanarịrị n'ụgbọ ịkwọ ụgbọ mmiri, nwa agbọghọ ahụ nọ naanị ya na enweghị enyemaka.
Onye isi ụgbọ mmiri nabatara ya wee webata ya dị ka Martín Nevares, nwa ya nwoke nke bi na ala ọhụrụ. N'ime akwụkwọ atọ "Tierra Firme", "Venganza en Sevilla" na "La Conjura de Cortés" anyị na -anụ ụtọ ihe omume nke nwa agbọghọ a nwere ike ịchịkwa ọdịnihu ya na iche ihe egwu niile ihu.
Nlaghachi nke catón
Akwụkwọ akụkọ ọhụrụ nke Matilde Asensi na -atụgharị ọzọ na ikike ịkọ akụkọ ya, ghọtara dị ka usoro ya iji mee ka onye na -agụ ya rapara n'akwụkwọ ahụ.
Nlaghachi nke nchịkọta Cato: Gịnị ka okporo ụzọ Silk, ọwa mmiri nke Istanbul, Marco Polo, Mongolia na Ala Nsọ nwere? Nke ahụ bụ ihe ndị na -akwado akụkọ ikpeazụ Cato, Ottavia Salina na Farag Boswell, ga -achọpụta, tinye ndụ ha n'ihe egwu ọzọ iji dozie ihe omimi malitere na narị afọ mbụ nke oge anyị.
Edere ya nke ọma, yana ụda nke na -eme ka ndị na -agụ ya nwee ibe na -enyo enyo site na ibe yana isi site n'isi ruo na njedebe, Nlaghachi nke Cato bụ ọmarịcha ngwakọta na akụkọ ihe mere eme nke Matilde Asensi jidere anyị ọzọ ka anyị ghara ịhapụ anyị gbapụ ruo mgbe okwu ikpeazụ.
Ọfọn, ebe a ka ekwuru. Ọ bụrụ na ọkacha mmasị gị bụ ndị ọzọ, a na -anabata ikwu gị. Na -anakọta echiche gbasara akwụkwọ Matilde Asensi o doro anya ịba ọgaranya ma weta echiche ọhụrụ.
Tags Matilde Asensi, Akwụkwọ akụkọ ihe mere eme, Akwụkwọ akụkọ omimi
1 kwuru na «akwụkwọ kacha mma 5 nke Matilde Asensi dere»
Pingback: Chọpụta ebe a akwụkwọ akụkọ ihe omimi gị kacha mma> 2021